I-GatesAir idibanisa iVidiyo ngaphaya kweNkxaso ye-IP kwiQonga loThutho lwe-Intraplex® Iindaba ze-NAB | I-2020 I-NAB bonisa i-Media Partner kunye noMvelisi we-NAB BONISA LIVE. Iindaba zeeNjineli zoSasazo
Ikhaya » iindaba » I-GatesAir idibanisa iVidiyo ngaphezulu kweNkxaso ye-IP kwiQonga loThutho lwe-Intraplex®
I-GatesAir idibanisa iVidiyo ngaphezulu kweNkxaso ye-IP kwiQonga loThutho lwe-Intraplex®
Ukunyuka kwesicelo seSango le-SRT elungele iTV kunye nosasazo lwerediyo ehamba ngaphandle lwenziwe, ividiyo ephezulu yeebhendi yomxholo kunye nomxholo weaudio kwiindawo ezininzi
ICINCINNATI, Agasti 2, 2019 - GatesAir, inkokeli yehlabathi kwizisombululo ezingenazingcingo, ezingaphaya komoya ezinokusasaza unomathotholo kunye nabasasazi beTV, yongeze isicelo esitsha kwiqonga lezothutho le-Intraplex Ascent ukuxhasa ividiyo ethembekileyo nekhuselekileyo malunga nezothutho ze-IP ecaleni komsindo. Isango elitsha lenyuka le-SRT, ukuba lutyhilelwe kwi-IBC2019 (ngoSeptemba 13-17, RAI Amsterdam), iya kuba luncedo ngakumbi kubasasazi abalawula ividiyo enegalelo kunye / okanye umxholo we-point-to-multiplay.
Inkxaso yevidiyo yesicelo ikwazisa ukunyuka kwintengiso yeTV, kunye nexabiso elikhethekileyo lesasazo losasazo lukazwelonke londlala iindawo ezininzi. Ukunyuka ngoku kuya kubonelela ngenkxaso ebonakalayo yalo naliphi na ixesha lokwenyani, iprotocol yokusasaza ividiyo esekwe kwi-IP, ngokusetyenziswa kwe-ATSC 3.0 kunye ne-DVB-T / T2.
I-GatesAir yazisa i-Intraplex Ascent njenge-gen-gen elandelayo ye-Audio kwiqonga le-IP kwi2019 NAB Bonisa ngo-Epreli. I-Intraplex Ascent imele indalo yokusasazeka kunye nokuhlangana kwe-IT, kwaye yinkqubo yokuqala ye-GatesAir ye-Intraplex yokuphila kwiseva ye-COTS x86. Ukunyuka kunika abasasazi ngeqonga lothutho olunobungozi kakhulu, olungafunekiyo kunye nolwelwe amafu ngenkxaso ye-multichannel kunye nokusasazwa. Yenzelwe ulawulo olukumgangatho ophakathi kunye nokunxibelelana okuphezulu, ukunyuka kuyahambelana nomgangatho we-AES67, izisombululo zenethiwekhi zangoku ze-AoIP, kunye uninzi lwee-Intraplex Audio ngaphezulu kweekhowudi ze-IP.
Ukunyuka kunika ezimbini izinto eziphambili ezahlulayo zothutho lwe-IP: ukukwazi ukulawula imijelo emininzi yokuHanjiswa okuKhuselekileyo (i-SRT) kwiqonga eliphakathi, kunye nokudityaniswa kwesoftware yeGatesAir eyingqayizivele yeDynamic Stream Splicing (DSS). Oku kugqibela kukwahlukanisa idatha ye-SRT kuzo zonke iinethiwekhi ezingafunekiyo, kwaye yongeza ukhuseleko ngokulahleka kwepakethi kunye nokusilela kwenethiwekhi.
Kwi-IBC2019, iGatesAir iyakubonisa indlela yokunyuka kweSango le-SRT ukuxhasa ukuthutha okuqinisekileyo kunye nokufihliweyo komxholo wevidiyo kokubini ekubonakaliseni i-point-to-point and point-to-multiplay. Ukongezwa kwesoftware ye-DSS kuya kuxhasa ukuphindaphindwa kwemijelo ye-SRT ngevidiyo kunye nevidiyo encamathelweyo kwiindlela ezahlukeneyo zenethiwekhi, ukufezekisa isikhombisi esinye-sokusebenzisa umjelo omnye wokukhusela ukungabi nazimpazamo nakusilela.
"Ukusukela kwisicelo sethu sonyuka se-SRT sangoLwesithathu sixhasa ukusasazwa kweendlela, sinokulinciphisa ngokufezekileyo ubuyiselo lwe-SRT, kwaye sandise amandla angaphezulu omsebenzi womnatha ukusasazwa kwevidiyo," utshilo Keyur Parikh, usekela-mongameli kunye nomphathi jikelele, iqela leMveliso ye-Intraplex. abathengi bethu abasasaza ividiyo yexesha langempela kunye nomsindo ngaphezu kwe-microwave, ifayibha kunye nokuqhagamshelwa kwe-IP, kunye nokuhambisa loo mijelo iphakamile ukuya kwizitudiyo ezininzi okanye indawo yokuhambisa.
I-Parikh yongeza ukuba usetyenziso lunokuma ukuxhasa ngakumbi imisinga kunye nokuya kwiindawo njengoko kufuneka, ngesantya sebhendi yevidiyo ukuya kwi200 Mb / s kwinqanaba lesiseko. "Oko kungabandakanya imithombo emininzi ye-50 Mb / s, okanye umsinga omkhulu kakhulu ovela kusetyenziswa iikhowudi zevidiyo okanye ezinye iinkqubo zentloko," utshilo. "Ukunyuka kwesango le-SSI ye-SRT isikali ngaphandle komthungo kunye neqonga lezinto ezininzi ezisisiseko, kuvula ukwahluka okubanzi kwezicelo zosasazo lweendaba ukuxhasa umabonakude welizwe okanye unomathotholo."
Iqonga le-Intraplex Ascent yeqonga lifumaneka ngeendlela ezimbini, nganye nganye ixhasa imijelo yeaudio ye-32 (AES3, AES67, analog). Zombini ezi nguqulelo ziya kubonakala kwi-IBC2019: iserver ye-1RU, kunye nokukhethwa kokucwangciswa kweendlela zomzimba kunye ne-AES67; kunye nesisombululo sesoftware kuphela esisebenza kwisitya esibonakalayo. Ukunyuka kunyusa ixabiso kubasasazi ngokususa isidingo seekhowudi ezininzi ezahlukileyo kunye nezixhobo ezincedisayo kwisitudiyo sokuqala okanye kwi-headend. Oluyilo olulungelelanisiweyo lukhulula iirisk ezininzi zezixhobo kumgangatho wenqanaba lamashishini, ukwenza lula ukufakwa kunye nolawulo lweenkqubo.
IGatesAir, Inc., inkampani yephothifoliyo yeGores Group, ibonelela ngezisombululo ezigqibeleleyo zosasazo lomoya kunye nosasazo lukamabonakude, ukusebenzisa amandla ombane ngaphandle kwamacingo ukukhulisa ukusebenza kweendlela ezininzi, iinkonzo ezibaluleke kakhulu. Ukunika amandla kuthungelwano lomoya-jikelele kwihlabathi lonke ngokuthembeka okungenakuthelekiswa nanto phantse iminyaka eli-100, izisombululo zeGatesAir zokwenza ukuba abasasazi benze, bathuthise kwaye bahambise umxholo werediyo kunye nomabonwakude. Ngabathengi kumazwe angaphezu kwe-185, inkampani ikhokelela kumzi-mveliso kwizinto ezintsha kunye noyilo loyilo, ekuphuculeni ukusebenza ngokukuko kunye nokunciphisa iindleko zizonke zobunini ngazo zonke iimveliso eziyilwe zadityaniswa e-USA. Tyelela www.gatesair.com ngolwazi olungakumbi, Njengathi kwi-Facebook www.facebook.com/gatesair, kwaye silandele kwi-Twitter kwi @GatesAir.
Malunga neqela leGores
Iqela leGores, elasekwa ngo-1987 ngu-Alec Gores, liqumrhu lotyalo-mali lehlabathi elijolise ekufumaneni umdla wokulawula kumashishini akhulileyo nakhulayo anokuthi axhamle kumava okusebenza kwenkampani kunye nesiseko semali esiguqukayo. Ifemi idibanisa ubuchwephesha bokusebenza kunye neenkcukacha zokukhuthala okufanelekileyo komthengi weqhinga kunye neqela leM & A elinamava lomthengi wemali yemveli. Ngaphezulu kwembali yayo yeminyaka engama-30, iQela laseGores libe ngumtyali mali okhokelayo obonakalise irekhodi elithembakeleyo lokudala ixabiso kwiinkampani zepotifoliyo ecaleni kolawulo. Ikomkhulu elikulo los Angeles, Iqela leGores ligcina iiofisi eBoulder, CO, naseLondon. Ngolunye ulwazi, nceda u tyelele www.gores.com.
I-USSI yeHlabathi inyula u-Anthony Morelli njenge-COO - Oktobha 22, 2020
2016 NAB Bonisa I-2016 NAB Bonisa i-Job Fair 2016 NAB Bonisa iindaba Izabelo zoBasazo Umagazini we-Broadcast Beat Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli KwiNkomfa yabasasazo KwiNkomfa yoSasazo NAB 2015 NAB 2016 NAB Bonisa NAB Bonisa i-2016 imisebenzi yokubonisa NAB Bonisa i Las Vegas NAB Bonisa Ukubhaliswa NAB16 nabshow Umbutho kaZwelonke woLwazi lwabasasazo Yelizwe loPhuhliso 2019-08-02
Previous: I-StreamGuys yandisa ukuDityaniswa kwamathuba okuThunyelwa kweKlasi ngoShishino kunye nezisombululo zePodcasting nee-API ezintsha.
next: Iipodcasters zinokuzithengisa njani iiVangeli zabo zeNgcono @IBCShow